Og-barruuOduu Ajaa'ibaaTeknoolojiiSeenaaTafakkurHalkan Dheerate
ODUU GAMMACHIISAAKitaabni Seenaa akkan hawataa ta’e Seenaa dabree fi jijjiirama haaratis walqabsiisee haala barumsi gaariin irraa argamuu danda’uun dhiheessu, Shoora Qeerroo fi Qarreen Qabsoo jijjiirama haaraa keessatti qaban galmeessee dhaloota duubaatiif dabarsu, akkasumas Asoosama ajaa’ibsiisaa s
Chaayinaan Saatalaayitii akka addeessaa halkan iftu gara hawaatti erguuf qophaayaa jirti
Chaayinaan saatalaayitii ifa aduu irraa argatu akka addeessaa deebisee calaqqisuu danda’u kan hojjataa jirtu yoo tahu, waggaa lama booda gara hawaatti ergitee ifaa daandiwwan magaalotaa addeessa namtolchee (artificial moon) kanaan bakka buusuuf kan karoorfatte tahuu beeksifte. Miidiyaaleen mootumma
Tajaajilli Youtube kan Sa’aa 1 oliif addaan citee ture amma deebi’ee dalagaa eegalee jira.YouTube dhaabbata guddaa kaampaanii Google jalatti argamu yoo tahu, dhaabbilee akka sadarkaa addunyaatti humna jabaa qaban keessaa isa tokko. Guutuu addunyaatti namoota Biiliyoona 1.8 oltu YouTube fayyadama. ka
Feesbuukiin nama miiliyoona 50 butamee akka ture beekame
Dhaabbanni Feesbuuk akka jedhetti akkaawontiin fayyadamtoota isaa miiliyoona 50 tahan qaamota hin beekamneen butamuu, Kiibxata dabre kan hubate tahuu ibse. Kanuma hordofuun Jum’aa hardhaa Feesbuuk fayyadamtoonni miiliyoona 90 tahan password isaanii akka jijjiiran kan godhe tahuu beeksise.Hogganaan s
Dalagaawwan Guyyaa Arafaa Jaalatamoo tahan jidduu Sadi
Guyyaan Arafaa guyyaa 9ffaa Ji’a Zulhijjaa yoo ta’u, guyyaan kun Guyyaa Gabroottan Rabbii dirree Arafaatti bahanii Rabbii Isaanii kadhatan, guyyaa Ararama itti gaafataniidha. Guyyaan Arafaa guyyaa Rabbiin Gabroota Isaatiif Islaamummaa file, guyyaa Islaamummaa itti guute. Guyyaa Rabbiin Gabroota isaa
Namni tokko nama biraatiif dhiiga kennu ykn fudhatuuf gosa dhiigaa kamtu kamiif taha?
Namni dhigni isaa A+ tahe➖A+, AB+ kennu danda’a.➖ A+, A-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’aNamni dhiigni isaa O+ tahe➖ O+, A+, B+, AB+ ni kenna➖ O+, O- tahe irra immoo fudhatuu ni danda’aNamni dhiigni isaa B+ tahe➖ B+, AB+ ni kenna➖ B+, B-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’aNamni dhiigni i
Rabbiin wan barbaadeen kakata. wanti Rabbiin kakateen ammoo wan guddaa ykn jabaa tahu agarsiisa. Rabbiin Qur’aana isaatiin akkas jedha.“Bariin Kakadhe. Halkan kurnaniinis kakadhe” (Suuraa Fajr 1-2)Halkaan Rabbiin Qur’aana isaa keessatti ittiin kakate kun guyyoota kurnan ji’a Zulhijjaa tahuu mufas
Kaampaaniin Naayik (NIKE) kophee ofumaa of hidhu hojjate. Kopheen kun chaarjii elektriikiitiin dalaga. eega miila keessa kaayanii booda yoo harkaan tuqan ni hidhama. wayta baafatuu fedhanis bakkuma san harkaan dhiiban. taa’anii haada kophee harkisaa ooluun hin jiru. teknoolojiin kun bara 2016 hojii
Uumamni kun uumama ajaa’ibaati. Yoo fagoo laalan uumama gosa sadih irraa waan ijaarame fakkaata malee, bineensa tokko hin fakkaatu. Qaama bineensota Beaver fi Otter jedhamanii uumama kana irratti arguu dandeettu. Qoffee isaa fi kottee isaatiin allaattii fakkaata. Eegeen isaa bishaan keessa daakuuf a
Masr YouTube ji’a 1 uggurte
Waahee uumama kanaa Viidiyoo kanarraa daawwadhuUumamni kun Biyyoota Ameerikaa Kaabaa keessatti argama. Sababa kanaafis gafarsa Ameerikaa jedhanii waaman. Baaysan maatii Bovidae keessatti ramadama. Akkuma amma dura isiniif dhiheessee, Maatiin Bovidae bineensota akka Hoolaa, re’ee, gadamsaa of keessaa
Amala ilmi namaa waliin uumame keessaa inni tokko dallansuudha. Dallansuun firummaa kutti, fayyyaa nama dhoorgiti, qabeenya namaa keessaa barakaa fuuti. Kanaaf Sheeyxaanni ilma namaa dallansiisuu dalagaa ijoo godhatee socho’a. Islaamummaanis ammoo ilmi namaa dallansuu ofii akka too’atu barsiisa. Nam
Allaattiin kun Pelikaan(Pelican) jedhama. Uumamni kun Ardii Antarkitikaa yoo taate malee, Ardiiwwan hafan hunda keessatti ni argama. Sanyiin uumama kanaatis saddeettu jira. Sanyiiwwan kunniin cufti naannawa qilleensa owwaa, qarqara lagaa fi haroowwan cinatti argamu. Jireenya allaattii kanaatiif bish
Appilikeeshiiniin Telegram biyyoota addunyaa heddu keessatti dhaabbatee akka ture beekame
Appilikeeshiiniin Telegram ganama har’aa irraa jalqabee biyyoota addunyaa heddu keessatti dhaabbatee akka ture dhaabbatichi beeksise. Dhaabbatichi gama Twitteriitiin akka ibsetti, humni elektrikii naannawa Amasterdaamitti addaan cituu isaatiin walqabatee, Applikashiinii Telegram irrattis rakkoon tek
Uumamni kun sanyii lootuu keessaa isa tokko yoo ta’u, guddina qaamaatiinis lootuuwwan gurguddaa keessatti ramadama. Qophii hardhaa kana keessatti, uumama kana gara bosona Ameerikaa kibbaa fi biyyoota kaariibiyaanii imallee daaw’anna. Sanyiiwwan Iguwaanaa heddutu jira. Sanyiiwwan garagaraa kunniin qu
Baarakudaa, Qurxummii Ilkaan Qaraa
Dachiin irra jiraannu tun harka dhibba keessaa harki 75 bishaaniin uwwifamee jira. haaluma kanaan baay’ini lubbu qabeeyyii bishaan keessa jiraniitis, lubbu qabeeyyii lafarra jiraatan dachaa hedduun caala. Uumamni hardhaaf isiniif filadhe sanyii qurxummii yoo ta’u, maqaan isaatis Baaraakudaa jedhama
Uumamni har’a isiniif dhiheessu, uumama Rabbiin xiyyeeffannaa guddaan akka ilaallu nutti hime keessaa isa tokko. Rabbiin guddaan Suuratul Nahl, Suuraa 16ffaa aayaa 79 irratti akkana jedha:أَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَى ٱلطَّيۡرِ مُسَخَّرَٰتٖ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُۚ إِنَّ فِي ذ
Sagaleen Hawaasa Muslimaa Haa Dhagahamu!
Hawaasni Muslimaa Itoophiyaa mirgi amantiisaa akka kabajamu waggoota hedduuf, keessattuu bara 2012 irraa eegalee, qabsoo hadhaawaa taasisaa turee jira. Miseensonni Koree Fala Barnaadduu hawaasichaa gaaffilee mirgaa ummanni kaase qabatanii karaa nagayaatiin mootummaaf gaaffii waan dhiheessaniif qofa
Seenaarraa haa barannu
Rabbi (SW) ergamtoota garagaraa gara dachii kanaa ergee, dhaamsa qajeelaa akka nu biraan gahan taasiseera. Ergamtootaa fi Nabiyyoonni namootuma akka keenyaati. Rakkoo fi gammachuu garagaraa keessa dabarsaniiru. Nutis rakkoo fi balloo isaanii sanirraa barachuu qabna. Kaayyoon nabiyyoonni nama ta’anii
Magaalaan Aksuum Muslimootaaf Maali?
Hordooftoonni Amantaa Ortoodoksii magaalaan Aksuum magaalaa Kabajamtuu jechuun amanu. kun immoo mirga. Islaamummaan amantaa kaamiyuu irratti dhiibbaa hin godhu, abbaan barbaade wan barbaadeetti amanuu mirga kan qabu tahuu amantaan keenya Islaamummaan ni barsiisa. Haata’uu malee Aksuum akkuma hordoft
Qalbii teenya haa jabeeffannu
Qajeellummaa fi gad dhaabbannaa nama tokkootiif qur’aanni haalaan barbaachisa. Karaan gaariin gara Rabbii ittiin dhihaachuu dandeenyuunillee kalaamuma isaa irra deddeebinee dubbisuudhaani. Dabalataan Qur’aana irra deddeebi’anii dhaggeeyfachuu fi qara’uun hiikkaa isaa akka hubannuu fi saniinis qajeel
Kaayyoo milkeessuu barbaaddu bira gahuudhaaf, karoora jabaa baafatuun dirqama. Nuti Muslimoonni kaayyoo takka qabna. Sunis jannata Rabbii argachuudha. Jannata argachuudhaaf ammoo Rahmata Rabbii argachuun dirqama. Rahmata Rabbii argachuuf ammoo karaa Rabbii irra deemuun barbaachisaadha. Karaa Rabbii
Jiruuf jireenya ilma namaa keessatti keessummaan bakka guddaa qaba. Keessummaa namatti dhufte haala gaariin keessummeessuun barbaachisaadha. Waan keessummaan sun nurraa barbaadu cufa karaa halaalaatiin isaaf guutuun waan islaamummaan nurra keetteedha. Harraan tana keessummaan jabduun yoo namatti dhu
Riqicha Daawwitii irraa hojjatame.
Riqichi kun biyya chaayinaa daggala guddaa tokko keessatti gaara 2 jiddutti hojjatame. ol fageenyi isaa lafarraa Meetira 300 yoo tahu, lafarra ammoo Meetira 430 dheerata. akkasuma meetira 6 bal’ata. Riqichi kun Diizaayinara lammii israa’el kan tahe nama Haim Dotan jedhamuun Diizaayinni lafa kaayame,